120Hz, 60x zoom, SD 855+ တွေပါဝင်တဲ့ realme X3 Superzoom နဲ့ realme X3 တို့ ထွက်ရှိလာ • TECH CORNER
ပြီးခဲ့တဲ့လက realme အနေနဲ့ realme X3 SuperZoom ဖုန်းအသစ်ကို European ဈေးကွက်မှာ မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် ဒီနေ့မှာတော့ X3 SuperZoom အပြင် realme X3 ကိုလဲ Indian ဈေးကွက်မှာ စတင်မိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ realme X3 series ရဲ့ စတင်ဈေးနှုန်းက $330 (၄ သိန်း ၆ သောင်း ဝန်းကျင်) က စတင်မှာဖြစ်ပြီး အတော်လေးမိုက်တဲ့ Specifications တွေ ပါဝင်လာပါတယ်။
realme X3 နဲ့ X3 SuperZoom ရဲ့ အနောက်ဘက်ကို 3D curved glass နဲ့ ပြုလုပ်ထားပြီး အရှေ့ဘက်မှာ 6.6-inch FHD+ IPS LCD Display နဲ့အတူ ဆေးတောင့်ပုံစံ Dual Punch-Hole selfie camera တွေကို တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ ဖုန်းနှစ်လုံးစလုံးမှာ screen refresh rate အနေနဲ့ 120Hz အထိ ပါဝင်ပါတယ်။ Display ကိုတော့ Corning Gorilla Glass5အသုံးပြုထားပါတယ်။
Processor အနေနဲ့ Snapdragon 855+ SoC ကို အသုံးပြုထားပြီး LPDDR4x RAM, UFS 3.0 Storage တို့နဲ့ တွဲဖက်ထားပါတယ်။ Battery အနေနဲ့ 4200mAh Battery ပါဝင်ပြီး 30W Fast Charging support နဲ့အတူ အားအပြည့်သွင်းဖို့အတွက် ၅၅ မိနစ်ပဲ ကြာမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ Android 10 based, realme UI နဲ့ မောင်းနှင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
realme X3 SuperZoom မှာ ကင်မရာ ၄ လုံးတပ်ဆင်ထားပြီး Samsung GW1 64MP Main sensor, OIS ပါဝင်တဲ့ 8MP periscope telephoto lens နဲ့အတူ 5x optical zoom, 60x hybrid zoom အထိ ရိုက်ကူးနိုင်မှာပါ။ နောက်ထပ် ကင်မရာ ၂ လုံးက 119-degree ultrawide sensor, 2MP Macro camera တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ကင်မရာ features တွေအနေနဲ့ AI Super Nightscape, Ultra Nightscape, Tripod Mode, Starry Mode နဲ့ Pro Nightscape ဆိုတဲ့ setting5ခု ပါဝင်ပြီး Mode တစ်ခုချင်းစီကို Manula Control ပြုလုပ်နိုင်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ Starry Mode ကို အသုံးပြုပြီး ညဘက်မှာ ကြယ်တွေကို ရိုက်ကူးနိုင်မှာပါ။
အရှေ့ဘက် Punch-Hole နှစ်ခုထဲမှာတော့ 32MP နဲ့ 8MP Selfie Camera နှစ်လုံးကို တပ်ဆင်ထားပါတယ်။
realme X3 မှာတော့ 64MP Main sensor, Ultra-wide lens, 2x Optical Zoom lens နဲ့ Macro Lens စုစုပေါင်း ၄ လုံးကို တပ်ဆင်ထားပြီး အရှေ့ဘက်မှာတော့ 16MP+8MP Selfie Camera ၂ လုံး တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ X3 မှာလဲ Starry Mode နဲ့ Nightscape Mode တွေ ရိုက်ကူးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
3.5mm headphone jack မပါဝင်ပဲ security အနေနဲ့ Side-Mounted fingerprint scanner ကို တပ်ဆင်ထားပါတယ်။
realme X3 ရဲ့ ဈေးနှုန်းတွေက
GB RAM + 128 GB storage – Rs. 24,999 (~$330, ၄ သိန်း ၆ သောင်း ဝန်းကျင်)
8 GB RAM + 128 GB storage – Rs. 25,999 (~$343, ၄ သိန်း ၈ သောင်း ဝန်းကျင်) အသီးသီး ကျသင့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
realme X3 SuperZoom ရဲ့ ဈေးနှူန်းတွေက
8 GB RAM + 128 GB storage – Rs. 27,999 (~$370, ၅ သိန်း ၂ သောင်းဝန်းကျင်)
12 GB RAM + 256 GB storage – Rs. 32.999 (~$436, ၆ သိန်း ၁ သောင်း ဝန်းကျင်) အသီးသီးကျသင့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အရောင်တွေအနေနဲ့ Glacier Blue နဲ့ Arctic White ဆိုတဲ့ အရောင် ၂ မျိုး ရရှိမှာဖြစ်ပြီး India မှာ June 30 ရက်နေ့ စတင်ရောင်းချမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Share via:0Shares0Huawei အနေနဲ့ Under-Display Selfie Camera နဲ့ Virtual Buttons တွေ ပါဝင်တဲ့
AMOLED Display နှင့် LCD Display တို့၏ အားသာချက်၊ အားနည်းချက်များ (16,694)